အာဆီယံ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် (AIFFA) တွင် ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနှင့် ဒါရိုက်တာ ဝိုင်း တို့ ဆုရရှ?? - Yangon Media Group
အာဆီယံ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် (AIFFA) တွင် ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနှင့် ဒါရိုက်တာ ဝိုင်း တို့ ဆုရရှ??
မလေးရှား နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သော အာဆီယံ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော် Asean International Film Festival & Awards (AIFFA) တွင် ဒါရိုက်တာဏကြီးနှင့် ဒါရိုက်တာဝိုင်းတို့ မှ ဆုများရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ဆုပေးပွဲကို ဧပြီ ၂၇ ရက်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကူချင်း မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့ရာ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးမှ ‘မီ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကြီးဖြင့် (Best Director of Photography ) ဓာတ်ပုံဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာဝိုင်းမှ ‘ရွှေကြာ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြင့် Special Jury Award ဆုဖြင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အာဆီယံနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင် ပွဲတော်ဖြစ်သော Asean International Film Festival & Awards (AIFFA) ဆုပေးပွဲတွင် ‘မီ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သရုပ် ဆောင်ခဲ့သော သရုပ်ဆောင် ပိုင် ဖြိုးသုနှင့် ရွှေကြာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ သော သရုပ်ဆောင် အလင်းရောင်တို့မှာ ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ ”ရွှေကြာ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာဝိုင်းမှ ရိုက်ကူး ပုံဖော်ထားပြီး သရုပ်ဆောင် အလင်းရောင်၊ ဖွေးဖွေး၊ သင်ဇာဝင့် ကျော်တို့မှ အဓိကပါဝင်သရုပ် ဆောင်ထားကာ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေး ပွဲတွင် ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု၊ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားဆုနှင့်အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင် ဆုတို့ကိုရရှိခဲ့သော ဇာတ်ကားတစ်ကားလည်းဖြစ်သည်။
”မီ ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာဏကြီးမှ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီး သရုပ်ဆောင်နေတိုး၊ ပိုင် ဖြိုးသုတို့မှ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကာ Star Award ဆုပေးပွဲတွင် ဆုတံဆိပ်များရရှိထားသည့် ဇာတ် ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။
မလှိုင်မြို့၏ နှစ် ၁ဝဝ ပြည့် ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဆွမ်းလောင်းပွဲနှင့် ရာပြည့်မော်ကွန်း စိ??
'လောကကြိုးဝိုင်း' ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို ရုပ်သံလိုင်းအချို့တွင် ထုတ်လွှင့်ပြမည်
(၆၆)နှစ်မြောက် ကယားပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် သဝဏ်လွှာဖတ်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်
အော့ဘလက်ကိုသက်တမ်းတိုးရန် ဆွေးနွေးနေကြောင်း နည်းပြဆြီ>ွမန်နီအတည်ပြု
ဆွာရက်ဇ်၏ အပြုအမူအတွက် ပြဿနာမရှိကြောင်း နည်းပြ ဗဲလ်ဗာဒီ ရှင်းလင်း
တောဝက် အသင်းသားများ မန်ယူသို့ လာရောက်ပြီး ပွဲကြည့်ခွင့်ရခဲ့